မန်းကိုကို ~ Mahn Ko Ko: Liberal Arts အမြည်း
Knowledge combined with Action is an Unstoppable Power
ဍုဂ်ပါင်လာ.ဆာ် - (ဒေါင်ပိုင်လားဆိုင်ဒ်) - ပြည့်စုံပါစေ
Liberal Arts အမြည်း
Liberal Arts ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမြည်းသဘောလေး မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။
မသိသေးသူတွေအတွက် ဗဟုသုတအဖြစ် ရည်ရွယ်သလို သိပြီးသူများအနေနဲ့လည်း လိုအပ်ချက်တွေကို
ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အခုပြောပြမယ့် Liberal Arts ဟာ သြစတြေးလျနိုင်ငံ မဲလ်ဘုန်းမြို့က
Swinburne တက္ကသိုလ်ရဲ့ Liberal Arts Diploma Course ( ၂ နှစ်သင်တန်း) အပေါ်မူတည်ပြီး ပြောသွား
ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောရရင် သြစတြေးလျဟာ Liberal Arts နာမည်ကို အသုံးပြုသင်ကြားတဲ့ကျောင်း
ဆိုလို့ အမေရိကန်နဲ့စာရင် သိပ်မရှိလှပါဘူး။ မဲလ်ဘုန်းမြို့မှာသင်ကြားပေးတဲ့ ဒီ Diploma Course ဟာ
ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်တဝှမ်းမှာတော့ ပြည်နယ်ပညာရေးဋ္ဌာနရဲ့ သတ်မှတ်ချက်အရ သင်ရိုးခေါင်းစဉ်တွေ
ဟာ တသမတ်ထဲလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ကျယ်ပြန့်လှတဲ့ ပညာရပ်တွေထဲက မိတ်ဆက်အနေနဲ့ ဘယ်အရာ
ဘယ်အပိုင်းကို ဘယ်ပညာရှင်ရဲ့စာအုပ်က ကူးယူ (သို့မဟုတ်) ရည်ညွှန်းပြီးသုံးမယ်ဆိုတဲ့ အသေးစိတ်သင်
ရိုးပုံစံတွေကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာကျောင်းနဲ့ တက္ကသိုလ်တွေက သတ်မှတ်ပါတယ်။
ဆက်မသွားခင် Liberal Arts ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်တာလေး နည်းနည်းကြည့်ရအောင်။ “college or
university subjects such as history, languages and literature” လို့ Cambridge Advance
learner’s Dictionary မှာ ဆိုထားတာကြောင့် ယေဘုယျ “စာပေ၊ သမိုင်း၊ ဘာသာစကား စတာတွေ
အပါအဝင် ဘက်စုံသင်ကြားပေးတဲ့ ကောလိပ် သို့မဟုတ် တက္ကသိုလ်အဆင့် ဝိဇ္ဇာပညာရပ်သင်တန်း”
နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ သင်ရိုးသတ်မှတ်ထားတာလေးတွေကို ကြည့်ကြရအောင်။
ပထမနှစ်အတွက်ဘာသာရပ်တွေကတော့ အောက်ကအတိုင်း တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
- Apply essential further study skills
- Research fields of study and enquiry
- Critique approaches to citizenship and the public sphere
- Analyse stories/narratives within cultures
- Analyse the human transformations of nature
- Research approaches to economy and society
- Analysearange of texts
- Conduct online research
- Create electronic presentations
- Analyse tradition and modernity
- Undertake academic research
- Analyse sociological understandings of human relationships
- Analyse urban form and culture
- Analyse theories of the self
- Analyse literary texts and genres
ဒါတွေကြည့်ရုံနဲ့တော့ အပေါ်ယံပါးပါးလေးပဲ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမနှစ်ဒီပလိုမာ (ခေါ်) တက္က
သိုလ်ဝင်တန်းနဲ့ မတိမ်းမယိမ်းလို့ဆိုနိုင်တဲ့ Liberal Arts Certificate IV (4) ရဲ့ အကျဉ်းရုံးကတော့
(၁) Apply essential further study skills
“ရှေ့ဆက်ပညာသင်ကြားရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော တတ်ကျွမ်းမှုများကို လက်တွေ့အသုံးချခြင်း” လို့
အဓိပ္ပါယ်ရမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီဘာသာရပ်မှာ (ပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ကူးချမိတာမျိုး
က ရှောင်ရှားနိုင်အောင်) စာရေးတဲ့အခါ မှီးငြမ်းပုံ၊ ပညာရှင်သုတေသီတွေရဲ့ အစီရင်ခံစာနဲ့ စာစီစာကုံး
တည်ဆောက်ပုံတွေ၊ စာစု စာအုပ်တွေကို စနစ်တကျဖတ်ပုံ မြည်းစမ်းပုံ အသေးစိတ်လေ့လာပုံတွေ၊ ရှေ့
ထွက်စကားပြောဖို့ ပြင်ဆင်တာတွေ၊ ဘက်စုံကရလာတဲ့ အထောက်အထားတွေကိုသုံးပြီး စာရေးပုံတွေကို
(၂) Research fields of study and enquiry
“လေ့လာသင်ကြားရမည့် ဘာသာရပ်နယ်ပယ်များနှင့် စုံစမ်းမှုများကို သုတေသနပြုခြင်း” လို့ပြောနိုင်
မယ်ထင်ပါရဲ့။ နောက်နှစ်တက်ရောက်သင်ကြားဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ တက္ကသိုလ် အထူးပြု ဘာသာရပ်တစ်
ခုနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုတွေ့ကြုံသင်ကြားရမယ်၊ ကျောင်းတွေရဲ့နှိုင်းယှဉ် ရွေးချယ်မှုတွေ၊ ကုန်ကျစရိတ်
တွက်ချက်တာ၊ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာရပ်တွေရဲ့ ပါဝင်တဲ့သင်ကြားရမှာတွေ၊ အနာဂါတ်အလုပ်ကိုင်
ရရှိနိုင်မှုအလားအလာတွေ၊ ပညာရပ်လမ်းကြောင်းနဲ့အဓိပ္ပါယ် စတာတွေကိုသုတေသနလုပ် ရှာဖွေတင်
ပြမှုတွေပါဝင်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေပြီဖြစ်တဲ့ ရှေ့ကဘွဲ့ရခဲ့သူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်း အစီရင်ခံတင်ပြ
(၃) Critique approaches to citizenship and the public sphere
“နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့် ပြည်သူ့အသိုင်းအဝိုင်းကို ဆန်းစစ်ချည်းကပ်ခြင်း” လို့ အဓိပ္ပါယ်ပြန်နိုင်မယ် ထင်
ပါတယ်။ နိုင်ငံသားများဆိုင်ရာဗဟုသုတတွေ အဓိကပါပါတယ်။ လူထုဆိုတာကို အတွေးအခေါ်ပညာရှင်
တွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပုံ၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်ပေါ်ထွန်းကား ပြန့်ပွားလာပုံ၊ အစိုးရအဖွဲ့တည်ဆောက်ပုံ
အခြေခံ၊ သြစတြေးလျနိုင်ငံရေး၊ ပါလီမန်ယန္တယားလှုပ်ရှားပုံ၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသမိုင်း၊ နိုင်ငံသူ
နိုင်ငံသားတွေနဲ့ လူတန်းစားတွေရဲ့ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာတဲ့ အခွင့်အရေးတွေတိုးတက်လာပုံ စတာတွေ
(၄) Analyse stories/narratives within cultures
“ယဉ်ကျေးမှုများအတွင်းရှိ ပုံ ဇာတ်လမ်းများနှင့် ဇာတ်ကြောင်းများကိုသရုပ်ခွဲခြင်း” လို့ ပြောလို့
ရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်သမ္မာကျမ်းစာဟောင်း ပထမစာမျက်နှာကိုဖတ်ပြီး ခေတ်ဟောင်း
အင်္ဂလိပ်စာပေအရေးအသားကို လေ့လာတာမျိုး၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ (အထူးသဖြင့်အနောက်နိုင်ငံတွေက)
ဂရိဒဏ္ဍာရီတွေ၊ နတ်သမီးပုံပြင်တွေရဲ့အကြောင်းနဲ့ ဒါတွေရဲ့ နေရာ ဒေသ ယဉ်ကျေးမှုအရ ခေတ်အလိုက်
လူသားတွေနဲ့ဆက်စပ်နေပုံ ပြောင်းလဲတတ်ပုံတွေအပါအဝင် ပုံပြင်တွေရဲ့ တည်ဆောက်ပုံတွေ ပါဝင်
(၅) Analyse the human transformations of nature
“လူသားများ သဘာဝအပေါ် သက်ရောက်ပြောင်းလဲစေမှုကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်း” လို့ ဆိုပါစို့။ လူ
တွေရဲ့ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်လာမှုသမိုင်းနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိတွေ့သက်ရောက်မှုတွေကို လေ့ လာတဲ့
ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ခုလုံး (သို့မဟုတ်) ဒေသတစ်ခုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိတဲ့ (တောင်ယာ
ခုတ် မီးရှိူ့စိုက်ပျိုးတာမျိုးအပါအဝင်) ကိစ္စမျိုး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုစံနမူနာ၊ ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်း
သိမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ လူတွေရဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် နားလည်လာမှုသမိုင်း စတာတွေကို မိတ်
(၆) Research approaches to economy and society
“စီးပွားရေးနှင့် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းသို့ သုတေသနပြု ချည်းကပ်ခြင်း” လို့ ဘာသာပြန်ရအောင်။ စီးပွား
ရေးဆိုတာကို မိတ်ဆက်ပေးပြီး ကမ္ဘာ့သမိုင်းအတွင်းက စီးပွားရေး၊ စက်မှုတော်လှန်ရေး၊ ကမ္ဘာ့စီးပွား
ရေးနဲ့ သယံဇာတွေ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သုံးစွဲမှုတွေရဲ့ ဆက်စပ်နေတာ၊ globalization အကြောင်းနဲ့ ပတ်
(၇) Analysearange of texts
“အမျိုးမျိုးသောစာသားများကို သရုပ်ခွဲခြင်း” ပါ။ စာပေနဲ့စကားလေ့လာရာမှာသုံးတဲ့ semiotics
ပညာရပ်မိတ်ဆက်၊ ကမ္ဘာ့နာမည်ရ စာအုပ်အချို့ရဲ့ရေးဟန်နဲ့ အမျိုးအစားတွေကို ခွဲခြားလေ့လာတာမျိုး၊
postmodernism လို ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။
(၈) Conduct online research
“အင်တာနက်ပေါ်တွင် သုတေသနပြုခြင်း” ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘာသာရပ်မှာ အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီး
သုတေသနအဆင့်ဆင့်လုပ်ပုံ (အထူးသဖြင့် မှီးငြမ်းစရာဝက်ဆိုဒ်တွေကို ရှာဖွေတာ၊ တန်ဖိုးဖြတ်တာ
နဲ့ အသုံးပြုပုံတွေ) ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - လက်တွေ့အနေနဲ့ ကမ္ဘာ့မှာထင်ရှားတဲ့ လူမှုရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စ
ရပ်တစ်ခုကို အတန်းထဲမှာ (ဆရာနဲ့အတူ) သုတေသနပြုရင်း နိုင်ငံအချို့ရဲ့မတူညီတဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေအပေါ်
(၉) Create electronic presentations
“လျှပ်စစ်နည်းပညာအပေါ်အခြေခံတဲ့ တင်ဆက်မှုများကို ဖန်တီးခြင်း” လို့ ဆိုနိုင်ပါမယ်။ ဒါဟာလည်း
ကျောင်သူ ကျောင်းသားတွေအတွက် ရှေ့လျှောက်သင်ယူမှုတွေမှာ အဆင်သင့်ဖြစ်စေဖို့ လေ့ကျင့်ပေးတဲ့
ဘာသာရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - Microsoft Office ထဲက PowerPoint ကိုသုံးပြီး လူကိုယ်တိုင်
ပြောစရာမလိုပဲ ကြည့်ရုံနဲ့နားလည်နိုင်မယ့် စာမျက်နှာ ၁၂ ခုပါတဲ့ presentation တစ်ခု လုပ်ပါဆိုပြီးခိုင်း
တာမျိုး၊ presentation တစ်ခုအတွက်ပြင်ဆင်မှု အစီအမံ (plan) တစ်ခုဆွဲနိုင်ဖို့နဲ့ လူမှုရေးကိစ္စရပ်တစ်
ခုခုကို presentation အဖြစ် တဆင့်ချင်းတည်ဆောက်နိုင်အောင် သင်ပေးတာမျိုးတွေ ပါပါတယ်။
အပေါ်ကဘာသာရပ်အားလုံးမှာ အတန်းရှေ့ထွက်ပြောဆိုတင်ပြမှု (presentation), စကားပြေ
(စာစီစာကုံး)၊ ရေးဖြေ၊ အတန်းတွင်းသင်ကြားမှုမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ်မူတည်အမှတ်ပေးပြီး
ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ အရည်အချင်းကို (grade တွေနဲ့) သတ်မှတ်ပေးပါတယ်။ presentation
ဖြစ်ဖြစ်၊ စာစီစာကုံးစကားပြေရေးခိုင်းတာမျိုးဖြစ်ဖြစ် ပညာရှင်သုတေသီတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ခိုင်မာတဲ့
သက်သေသာဓက အထောက်အထားတွေကို သတ်မှတ်စည်းမျည်းတွေနဲ့အညီ ထည့်သွင်းတင်ပြကြ
ဒီပထမနှစ်ပြီးရင် ဒုတိယနှစ်ဆက်တက်ရင်တက်၊ မတက်ရင်လည်း တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုကို လျှောက်
လို့ရပါတယ်။ စာမေးပွဲတွေမှာ ရတဲ့အမှတ်တွေဟာ တက္ကသိုလ်လျှောက်ရာမှာ သက်ရောက်မှုရှိတာများ
ပါတယ်။ သြစတြေးလျထိပ်တန်းတက္ကသိုလ် ၈ ခုမှာပါတဲ့ Monash University ဆိုရင် (Liberal Arts
Certificate IV အပါအဝင်) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ သင်တန်းတွေရဲ့ Certificate IV အဆင့်မှာ
ဘာသာစုံဂုဏ်ထူးထွက်မှ ကျောင်းသားအဖြစ်လက်ခံဖို့စဉ်းစားမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတာမျိုးရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်ရာမှာ အထက်တန်းကျောင်း (၁၂ တန်း) က
အောင်လို့လျှောက်တဲ့သူတွေနဲ့ Liberal Arts တို့လိုအပါအဝင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရယ်၊ သက်
ကြီးကျောင်းသားတွေအပါအဝင် ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူတွေရယ်လို့ အကြမ်းဖျင်းနှစ်မျိုးကွဲပြီး တက္ကသိုလ်
အလိုက် ထပ်ပြီးသတ်မှတ်ချက်အမျိုးမျိုး ကွဲပြားတတ်တာမို့ အဲဒါကိုတော့ နောင်အလျင်းသင့်မှ ထပ်ရေး
အပေါ်ကဟာကိုဆက်ရရင် ဒုတိယနှစ် Liberal Arts ပြီးသွားလို့ ဒီပလိုမာရပြီးရင် တက္ကသိုလ်တွေ
ရောက်တဲ့အခါ ဝိဇ္ဇာဘာသာရပ်ပိုင်းမှာ ခြောက်လကနေ တစ်နှစ်အထိကင်းလွတ်ခွင့် (credits) ပေး
တတ်တာမို့ ၃ နှစ်သင် ဘွဲ့တစ်ခုကို ၂ နှစ်၊ ၂ နှစ်ခွဲပဲ တက်ကြရပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၂ တန်းပြီး
ချိန်က စတက်ရင်တော့ အချိန်ပိုကုန်တာမို့ တက္ကသိုလ်ဆက်တက်ဖို့ အခက်အခဲအမျိုးမျိုးရှိသူတွေသာ
အတက်များကြသလို သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်တွေမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဘာသာရပ်တက်ဖို့ ပေါင်းကူးတံ
တားအနေနဲ့ တက်ကြတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဥပမာ Swinburne တက္ကသိုလ်မှာ နာမည်အသင့်အတင့်
ရှိတဲ့ Psychology ဘာသာရပ်ကိုကြိုက်လို့ တက်ချင်သူများ ဒီသင်တန်းလာတက်တာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
Swinburne တက္ကသိုလ်ရဲ့အဆိုအရတော့ Liberal Arts ဟာ Humanities and Social Sciences,
Community Development, Social Work, Professional and Creative Writing fields, Law,
Psychology, Education, Human Movement, Public Relations စတဲ့ ပညာရေးလမ်းခွဲတွေအတွက်
ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်တဲ့။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Liberal Arts ဟာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကျယ်ပြန့်တဲ့
(ဝိဇ္ဇာပညာရပ်ဆိုင်ရာ) အခြေခံအသိတွေပေးနိုင်တာကြောင့် စိတ်ဝင်စားသူများ အတွက်တော့ Course
၂၅၊ ၁၂၊ ၂၀၁၀
မှီငြမ်း - http://courses.swinburne.edu.au/
မှတ်ချက်။ ။ ကျနော်ကတော့ တက္ကသိုလ်မှာဝိဇ္ဇာဘာသာရပ်တွေထဲက ရွေးချယ်သင်ယူနိုင်ဖို့ရာ မိတ်
ဆက်အနေနဲ့ မြည်းစမ်းကြည့်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးကို သဘောကျမိပါတယ်။ (အချိန်မနှ
မျောသူတွေအတွက်ကို ဆိုလိုတာပါ။) နောက်ပိုင်းမှာလည်း Liberal Arts က စကားပြေ
(စာစီစာကုံး) နဲ့ အစီရင်ခံစာပုံစံကလေးတွေကို အမြည်းသဘော တင်သွားပေးပါဦးမယ်။
Posted by မန်းကိုကို at 12/25/2010
အင်္ဂါဟူး December 25, 2010 at 2:51 AM
နောက်တင်ပေးမယ့် စာတွေလဲဆက်ဖတ်မယ်.. နံပါတ် (၈) ကို မြန်မာပြည် အွန်လိုင်းသုံးလူငယ်တွေ ဖတ်မိစေချင်တယ်..
မန်းကိုကို December 25, 2010 at 8:47 AM
ဒါပေမယ့် သြစတြေးလျလိုနိုင်ငံမျိုးမှာ လေ့လာစရာ စာအုပ်၊ ဗီဒီယို၊ စုံစမ်းဖေါ်ထုတ်တတ်တဲ့ သတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းတွေရှိတာက ပိုပြီးကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လေ့လာနိုင်ဖို့ အထောက်အကူပေးတာမို့ ကွာခြားချက်တွေတော့ အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။
သုတေသနလုပ်ဖို့ နမူနာတစ်ခုကတော့ အင်္ဂလန်က အသက်အငယ်ဆုံး လူသတ်သမားတွေအဖြစ် အပြစ်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ Thompson နဲ့ Venables တို့ရဲ့ ၂ နှစ်သားလေး James Bulger ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုမျိုးပါ။ တစ်နှစ်အကြာမှာ ဆင်တူလူသတ်မှုမျိုး နော်ဝေနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့ပြီး Silje ဆိုတဲ့ ကလေးမလေးတစ်ယောက် သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
နှစ်နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေကြောင်းအရ ဆုံးဖြတ်ပုံ၊ သတင်းတွေထဲမှာ တင်ပြပုံဖေါ်တာ၊ ကလေးငယ်တွေကို ကိုင်တွယ်လမ်းကြောင်းပုံတွေမှာ အင်မတန်ကွာခြားခဲ့တာ တွေ့နိုင်ပါမယ်။ အင်္ဂလန်ကိစ္စဟာ သတင်းတွေရဲ့မျက်နှာဖုံးမှာ ဖေါ်ပြခံရပြီး ကလေးတွေရင်ဆိုင်ကိုင်တွယ်ဖို့ မလွယ်တဲ့ မတန်တဆအတွေ့အကြုံ တွေနဲ့ ဖြတ်သန်းစေခဲ့ရာက လူသတ်တဲ့ကလေးငယ်နှစ်ဦးကို နောက်ဆုံးထောင်ချခဲ့ပါတယ်။ နော်ဝေကိစ္စမှာတော့ တိတ်တဆိတ်နဲ့ပဲ ပြီးဆုံးသွားပြီး ရဲဖက်ကအရေးယူဖို့ မကြိုးစားပဲ လူမှုရေးဝန်ထမ်းနဲ့ စိတ်ပညာရှင်တွေရဲ့ လူသတ်ခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်နှစ်ယောက်ကို လူ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲ ပြန်ဝင်နိုင်ဖို့လုပ်ကိုင်နေခဲ့ကြတာ တွေ့ရပါမယ်။ အသတ်ခံရတဲ့ကလေးမလေးရဲ့ အမေနဲ့ ရပ်ရွာအသိုင်းအဝိုင်းတို့ရဲ့ ထားတဲ့စိတ်ထားဟာလည်း အင်္ဂလန်နဲ့ကွာခြားပုံဟာ လူမှုရေးဘာသာရပ်ကို လေ့လာလိုသူတွေအတွက် စံနမူနာကောင်းပါပဲ။ (http://www.guardian.co.uk/uk/2000/oct/30/bulger.simonhattenstone)
နံပါတ် (၈) မှာ လောပြီးရေးထားလို့ နည်းနည်းလွဲသလိုဖြစ်နေတဲ့ အရေးအသားကိုတော့ ပြန်ပြင်ထားပါတယ်။ နောင်ကို ဝက်ဘ်ဆိုဒ်က အချက်အလက်တွေယူရာမှာ ထားတဲ့စံတွေကို ရေးသွားဖို့ ကြိုးစားပါအုံးမယ်။
Anonymous December 25, 2010 at 1:42 PM
IMO, current Melbourne Model is heading
the University of Melbourne intoabig
liberal arts college plus professional
schools: law, medicine, engineering,and
business and graduate schools. Some say
it is merelyasmart ploy to charge full
or higher fees to local students.
In US, at4years colleges, liberal arts
education is integrated into any bachelor
In UK, now or very soon in British (only English) universities, there will not be subsidies for liberal arts majors.
So it can be claimed that liberal arts education is on decline or perishing!
However, Singapore which traditionally
ignore liberal arts education will set up
a liberal arts college with the help of
Yale (not real Yale degree in Singapore)
but Yale is used to legitimize and mitigate
the liability of newness of that programme.
It has some benefits, such as it can train
dentists who know history, engineers who
can discuss philosophy, accountants who can
talk about politics, well rounded graduates.
But US is now heading to3years degrees to
follow Bolonga model, agreed in Italy years
ago. Soon there may be cheaper and shorter
US degrees, but since most of first year US
students less prepared compared to British
or Australian counterparts. It is not sure
adding Liberal Arts components (and making
degree programmes longer) will be good for
a poor country like Burma. Specialization,
the current degree model, may serve Burma
better in future too!
မန်းကိုကို December 25, 2010 at 7:43 PM
ပထမတစ်ချက် သြစတြေးလျမှာ အဆင့် ၁ - ၂ မှာပြေးနေတဲ့ မဲလ်ဘုန်းတက္ကသိုလ် နဲ့ပတ်သက်လို့ အပြောင်းအလဲအချို့ကို သတိတော့ထားမိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဝိဇ္ဇာဖက်အခြမ်းမှာ အခြားမဆီမဆိုင်ဋ္ဌာနတွေက စိတ်ဝင်စားရာ ဘာသာရပ်တစ်ခုကို နှစ်စဉ် အခြေနေအပေါ်မူတည်ပြီး (ရွေးချယ်သင်ယူပြီး) အသိအတတ်ပညာကို သာမန်ထက်တိုးချဲ့လို့ ရတာတွေ့လို့ သဘောတော့ ကျမိပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ဒီကျောင်းမှာသင်တဲ့ ဝိဇ္ဇာဘာသာရပ်တွေထဲမှာ ကျနော်သဘောကျတာ အတော်များတာကို တွေ့မိတယ်။ အခြားတက္ကသိုလ်တွေမှာတော့ ဘာသာရပ်တွေသာများတာ စိတ်ကြိုက်ရွေးစရာ သိပ်မရှိသလိုပဲ။
ထားပါတော့ မဆီမဆိုင်တွေ ပြောနေမိပြီ။ ကျောင်းလခအပြည့်ယူဖို့ လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ ကျနော်လည်းသိပ်မသေချာဘူး။ ဒီအတိုင်းလည်း အစိုးရက ငွေကြေးခွဲတမ်းနဲ့ ထောက်ပံ့နေတော့ ဘယ်လိုကွာသလဲ အတိအကျသိမှ ပိုသေချာမယ်ထင်ပါတယ်။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ အပေါ်ပို့စ်မှာပါတဲ့ liberal arts Certificate IV ဟာ သီးခြားရပ်တည်သင့်တဲ့နေရာမှာ Swinburne တက္ကသိုလ်က ဒီပလိုမာသင်တန်းထဲ ရောစပ်ပေါင်းထည့်ပြီး ကျောင်းလခကို အများကြီးပိုရအောင် လုပ်ထားတာတော့ မြင်မိတယ်။ (ပညာရေး ထောက်ပံ့မှုကြောင့် ချက်ချင်းပေးစရာမလိုပေမယ့် သာမန်အားဖြင့် အခမဲ့နီးပါး ဖြစ်ရမယ့်အရာဟာ A$ ၂၀၀၀ လောက်သွားကျနေတယ်။)
liberal arts ဟာ ဆုတ်ယုတ်နေတာမှန်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဈေးတွက်တွက်လာကြတဲ့ အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှု လျော့လာတာဟာ မဆန်းလှဖူးလို့ ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။ ထပ်ဆင့်အနေနဲ့ သြစတြေးလျ တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ ရထားတဲ့ အဆင့်တွေဟာလည်း နိမ့်ကျလာတာကို ဒီနှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာ တွေ့လာရပါတယ်။ အဲဒီတော့ မဲလ်ဘုန်းတက္ကသိုလ်အနေနဲ့ သူ့ရဲ့အပြောင်းအလဲ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အကြောင်းပြလို့ကောင်းတဲ့ အချက်တစ်ခုဖြစ်လာပြန်ပါရော။
စင်္ကာပူကျောင်းကိစ္စကတော့ အဓိပ္ပါယ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကောက်လို့ရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ liberal arts ကျောင်းတွေဟာ သာမန်ပညာရေးစနစ် မပေးနိုင်တဲ့ အကျိုးအမြတ်အချို့ ပေးနိုင်တာမို့ အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ရှိလာတာဟာ ကောင်းတဲ့အလားအလာတစ်ခုလို့ မြင်ပါတယ်။
ထွေရာလေးပါး ဆက်ပြောနေရင်တော့ ရှည်သွားနိုင်ပါတယ်။
လိုရင်းပြောရရင်တော့ နှစ်တိုတိုနဲ့ ဘွဲ့တစ်ခုရနိုင်အောင် ချုံ့လိုက်ရင်လည်း ကောင်းတဲ့အခြမ်းတွေ ရှိတာပါပဲ။ မြန်မာပြည်အတွက် အထူးပြုသင်ရိုးတွေက ကောင်းတာမှန်ပေမယ့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ဝိဇ္ဇာပညာရပ်တွေမှာ အင်မတန် အားနည်းနေတာကြောင့် မျှတမယ့် စီမံခန့်ခွဲတာတွေ အတော်လေး လိုအပ်နေတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
ကျော်ထင် December 26, 2010 at 7:10 PM
အစက liberal arts ဆိုတာကို contemporary arts, installation arts တို့လို ဟာမျိုးတခုခုမှတ်နေတာဗျ ။ အတော်ဝေးတာပဲ။ ကိုယ့် Field နဲ့လုံးလုံးမဆိုင်သလိုဖြစ်နေတာနဲ့ exposures နည်းတာနဲ့ ဘာမှန်းအသေချာမသိခဲ့ဘူး။ အခုတော့ ကကြီးခခွေးလောက်တော့ သိသွားပြီ။ ကျေးဇူးပဲ
မန်းကိုကို December 26, 2010 at 11:10 PM
ဟုတ်ကဲ့၊ “ဃကြီး”နဲ့ “င” တွေအထိလောက်တော့ ထပ်လာဖို့ ရှိပါသေးတယ် :-)
မဆိုင်တာကို မသိတာ မဝေးပါဘူးဗျာ၊ liberal arts ဒီပလိုမာ ရထားတဲ့သူကို science အကြောင်းသွားမေးရင် ကွန်ပြူတာ အကြောင်းလောက်ကလွဲရင် သွားပြန်ဖြဲပြမှာပေါ့ :-)
ကျနော်လည်း စိတ်ဝင်စားပေမယ့် ဒုတိယနှစ်မှာ သင်တဲ့ဘာသာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိဖို့ အခွင့်အရေး ရှိချင်မှ ရှိနိုင်တော့မှာမို့ အားမလို အားမရတော့ ဖြစ်မိတယ်။ အဲဒီအဆင့်ကမှ သီအိုရီပိုင်း အခြေခံတွေ စပါလာမှာကိုးဗျ။ ပြီးတော့ ဒီပလိုမာမှာ သင်တာတွေက တက္ကသိုလ်တွေနဲ့စာရင် အဆင်သင့်ခွံ့ပေးသလို ဖြစ်တာကြောင့် သဘောကျတာပါ။
An Asian Tour Operator December 27, 2010 at 4:34 PM
အပေါ်က ကျော်ထင် လိုမျိုးထင် ခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးပါ။
Ayar fonts & unicode
Font: Zawgyi, mm3, Myanmar1
Zawgyi for Window7- 64 bit
မည်သူမဆို ဒီဘလော့က အချက်လက်တွေ
ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် (credit ပေးစရာ မ
လိုပဲ) ယူငင် သုံးစွဲနိုင်ပါတယ် ။
တဆင့် ရည်ညွှန်း ၊ ဘာသာပြန် ၊ ကူးယူဖေါ်
ပြထားတာတွေကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာ ပင်ရင်း
ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဋ္ဌာနတွေကို ရည်ညွန်းသုံးစွဲ ပေးကြပါ ။
ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ယူကြရအောင် ။
ဘားအံ၊, ကရင်ပြည်နယ်၊, Myanmar (Burma)
SAW WHITE ~ စ၀်ဃွိက်သး
Starting Your Own Credit Repair Business (part2of 2)
နိုင်ငံရေးသည် အုပ်စုဖွဲ့ရမ်းကားခြင်းမဟုတ် – အဲးခိုး
အိမ်မက်လွင်ပြင် - Deamz valley
ငါတို့ ဘုရားသခင်ကိုပဲ ငါတို့ယုံကြည်တယ်
Karen Community Association UK
Invitation to Karen National New Year 2754
ခင်းခါ့သင့်ဖေါဟ် စ၀်ဍုံလဲုိ့( ပြန်လည်ခြေချမိခြင်း )
ရိုးရာ လက်ချည်ပွဲ နှင့် သ၀ဏ်လွှာ
၄၃-ကြိမ်မြောက် ကရင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု စုပေါင်းသင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပပြီးဆီးခြင်း။
Photo Collage Tutorial
15th KNU congress 1
Poe Karen Literature
ခွဲါက႟င် ကီး္ဘ၀့်(kb)၊ လိက်ဖႜုံး-ဖင့်(font) ဍေ လိက်မေါဝ်ၟဖံႜုးအ်ုဆုဍုဂ်ဏဲ
Daw Aung San Kyi in Fort Wayne 2
ကရင့်တော်လှန်ရေးအစပိုင်းတွင် ကချင်တပ်များပူးပေါင်းပါဝင်မှု မှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ
အိပ်မက် (William Phan)
ထမင်းတနပ်ကျွေးဘို့ ကရင်တွေကိုတောင်းတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ မီးရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း
“စစ်အစိုးရတဖြစ်လဲ ကြံ့ဖွံ့အစိုးရရဲ့ ဇောက်နက်တဲ့ စကောနဲ့ကျွန်ုပ်တို့၏..”
MAHN SOE KAMAW
Karen United ~ Kawthoolei Media Service
သူနာပြုများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်တွင် လိုအပ်နေသော အပြန်အလှန်လေးစားမှု
တောက်ပကြယ်စင် ~ Tauk Pa Kye Sin
ကိုညိုကြီးရဲ့ MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA
အဖြူရောင်နတ်သမီး ~ Sea and Angel
BBC နှင့် Wireless Mobile Communication စနစ်အကြောင်းပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်း
မဗေဒါ ၈၈ - To raise women rights and gender awareness
ရင်တွင်းစကားစုများ (ပြည်ချစ်သားမောင် - ဇာနည်မောင်)
အမှတ်တရ နေ့စွဲများ... (ရဲထွန်းဇော်)
အမှတ်တမဲ့မှ အမှတ်တရ နေ့ရက်များသို့ (ဇွန်မ)
MOE THIHA AUNG
“အတွေးစလေးတွေ” (Ko Han Kyi)
ကံသ်ကညံ (Kaw Kanyaw)
အတွေးအခေါ်ပညာ၏ ပြဿနာများ – ဘာထရန် ရပ်ဆဲလ် အပိုင်း(၇)
နဒီသံလွင် (Karen Blogs ~ Freedoom for Fight)
နှလုံးသားနှင့်နားဆင်ပါ (HaveaLove)
Karen Got Talent
Burmese Cartoon Gallery (ကိုဇော်မျိုးလွင်)
Various Burmese Cartoon
M N P ~ ဘလော့ဂါ ပို့စ်များ
Thailand Unsettled #4: The Deep South (with Deep South Watch)
ရွက်မွန် ~ Fine Leaves
Bo kyaw Nyein
မောက္ခ ပညာရေး မဂ္ဂဇင်း (ခေတ်သစ်)
BBC ~ မြန်မာပိုင်း
မွနျမာ့ရုပျရှငျ - မငျးသား သိနျး ၆၀၀၊ မငျးသမီး သိနျး ၃၀၀၊ မငျးသမီးတှေ ဘာကွောငျ့ အရနညျးသလဲ
ကရင်စာပေကို ကျောင်းချိန်အတွင်း သင်ကြားနိုင်အောင် ဧရာဝတီတိုင်းစာယဉ် ကြိုးစားမည်
နှင်းတောင်ကုန်းတွေပေါ်က Harley Davidson တောင်တက်ပြိုင်ပွဲ
Gov’t to hold peace talks with 8 armed ethnic groups
လွိုင်ကော်ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ကိစ္စ ဧပြီလမကုန်ခင် အပြီးသတ်ညှိနှိုင်းရန် သဘောတူ
Khonumthung ~ Chin News Group
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ချင်းပြည်နယ်တစ်ဝှမ်း ကလေးငယ် (၆၀၀) ကျော်သေဆုံး
MoeMaKa: Burmese News & Media
သစ်ကောင်းအိမ် ● နှစ်ချိုမြစ် …. မဟာတံတိုင်းကြီးနောက်ကွယ်က ပင်လယ်
7 Life HACKS To GROW NAILS Fast & Strong
ပေါ်ပြူလာ ~ စာပေအနုပညာ ဂျာနယ်
The Voice (Myanmar)
Ron Paul on the campaign trail
Kantarawaddy Times: Karenni and Burmese News
ဈေးကွက်ဂျာနယ် (Myanmar Market Journal
Mizzima Burmese (မဇ္ဈိမ)
Kaowao (Burmese Version)
ကုမုဒြာ ဂျာနယ် | Kumudra
သျှမ်းသံတော်ဆင့် ~ Mongloi.org
Narinjara Burmese News Online
Burma News International | BNI
Myanmar Web Designer - website development and SEO services (မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုဒ် ဝန်ဆောင်မှု)
အလုပ်ကိုင် ရှာဖွေရေးနှင့် လူသားအရင်းမြစ်
ပညာရေး - ဗဟုသုတ
Jerold J. Mackenzie v. Miller Brewing Company
First Monday (peer review journal)
University of London ~ School of Oriental and African Studies
Apple - Apps - iTunes U
Center for Burma Studies - NIU - Center for Burma Studies
Harvard ~ MyCourses Open Courseware Intiative
Air War College ~ Gateway to the Internet
British Library ~ Online Gallery
webcast. berkeley |
Myanmar Online Encyclopedia ~ မြန်မာဝီကီ
Steve Pavlina ~ Personal Development for Smart People
ဦးထွန်းလွင် | weather forecast
နိုင်ငံရေး - အတွေးခေါ်
Regan Ralph: "This is why we don’t shape the agenda, we let others shape it"
Democratic Party (Myanmar)
VanSangVa ~ Basic Democracy Training
National Democratic Force (NDF)
ခတျေမောငျး | လစဉျထုတျစာစောငျ
National League for Democracy ~ NLD
Chatham House ~ Independent thinking on international affairs |
Ukraine, you're not alone !!
Gophers' Pitino: Facing L'ville notadistraction
FOX Sports on MSN l
| Fox ~ Breaking Sports News
Sports Training | Sport Fitness
ဖျော်ဖြေရေး - စာပေ - အထွေထွေ
10 of the best snack subscription boxes according to reviewers
Will 80s hairstyles makearesurgence?
Dog Found Dead on Air France Flight After Being Stored in Cargo Hold
ဇွဲပြည့်၊ ဆုပန်ထွာ တို့ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ “May July Fashion Shop” ဖွင့်ပွဲ
How To Safely Opt Your Device Out Of The Android Q Beta Program
What wrong with our country? Should Mr. President know about this!
ဒီမိုကရေစီ စနစ်လက်မခံနိုင်တဲ့ လူတွေ သွားပေတော့လို့သူရဦးရွှေမန်း ဆို
fastpasstv.com - free tv shows Resources and Information.
ShweDream.com ~ Myanmar Movies
FAIL Blog - Funny FAIL Pictures
ပေဖူးလွှာ ~ ရသစုံ မဂ္ဂဇင်း
freemyanmarvcd | Movies List
In Kazakhstan, Last Remaining Soviet-Era Leader Has Resigned
WHERE ARE THEY NOW: The cast of 'Pretty Little Liars'
Wall StreeJournal: Asia Home
e-Trade Myanmar (Myanmar Business Information Trade Portal)
Moody's Analytics: Economic Analysis, Historical & Forecast Data, Alternative Scenarios, Forecasting and Credit Risk Management
Financial Review | afr.com
How to StartaBusiness, WriteaBusiness Plan & FinanceaBusiness
Business News - Yahoo! News
How to Spot Monster Growth Stocks
What Kinds of Cars Can Qualify foraTitle Loan?
Can We Trust Deliberation Priests?
Yahoo Business - The West Australian
IPO Central from Hoover's
:: Dismal Scientist
MarketWatch - Stock Market Quotes
ကျန်းမာရေး - ကြံ့ခိုင်ရေး
Mae Tao Clinic ~ မယ်တော်ဆေးခန်း
Mae Tao Clinic: Strengthening the Health System in Southeastern Myanmar (part one)
ယမုံနာ ~ Online Clinic
စစ်ရေး - လုံခြုံရေး
USA begin mass-producing latest variant of Abrams tanks
President Trump Visits The Last Tank Plant In America
MWI Podcast: Women in National Security
GenDyn wins $2B modification for Virginia Class | Egypt to buy SU-35 from Russia | Taiwan requested 100 Main Battle Tanks from US
U.S. Official: Iran Destabilizing Region, Heightening Risks Of Arms Race
Army Guide News
Model of the Milkor 4x4 will be displayed at DSEI 2017
Diaporama (Army Recognition)
Type 99A 99 A2 ZTZ-99A main battle tank China
Defense News | News about defense programs, business, and technology
Robert D. Kaplan – Foreign Correspondent
Military Times | Military News
Military RSS News Feed
Defence Viewpoints from UK Defence Forum
Best outdoor activity apps to enjoy the spring with friends, family in 2019 - CNET
FCC Admits In Court That It Can't Track Who Submits Fake Comments
AFR - Technology
Thousands of kratom trees destroyed by MNLA in Kyar Inn Seik Kyi Township indicates need for more effective drug treatment options
EcoBurma » Travelers
Furry friends; Economic activity; Burmese pics – EcoBurma News Roundup #73
Funeral Services Society (Mae Sod) ~ နာရေးကူညီမှုအသင်း(မဲဆောက်)
ထိုင်းသိမ်းဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ ချင်းမိုင်မြို့မှ မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်း
Asian Human Rights Commission ~ (AHRC)
Karen Community - Bakersfield
Democratic Alliance of Burma (DAB)
AKO - Australian Karen Organisation
NLD ~ National League for Democracy
Friends of The Karen of Burma
The Ahmadi Post : Myanmar
Karen Human Rights Group | ကရင် လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့
လုကံ ဝကံ (အညမည)
Anheuser-Busch sending water to victims of Nebraska floods
Federal Reserve cuts growth forecast for U.S. economy
Kellyanne Conway: How she became the ultimate Trump White House survivor
Daily Express :: News / Showbiz
Clarence House artworks and furnishings chosen by Queen Mother to go on show
Antara News : The Indonesia News Agency
UNI - United News of India
Newsweek - The Daily Beast
The Nation ~ Thailand News
Graded English language dictations
The Best English4You (ကိုမောင်မောင်ဝမ်း)
မုရန်ဆောင်းပါး၊ ကဗျာ၊ စာပေများ ..Facebook နဲ့ Blogspot.com မှာကြည့်ရန်
The Light of the world (ဒေါက်တာတင့်ဦး)
လတ်သလော ပြည်တွင်း ငွေလဲနှုန်းထား
Ywar Thar Lay (YTU) - ရွာသားလေး၊
ချ စ် လို့ေ ရးတဲ့ က ဗျာ( ၂ ၈ )
Pekerjakan SEO Penuh Waktu untuk Mendapatkan Strategi Pemasaran yang Tepat
Kenyamanan Memiliki Pendingin Udara Portabel
Dark Skin Ebony Porn
Automatic Gates Van Nuys
What Is Video Conferencing (part2of 2)
ARAKAN ARMY 2
ထိုင်း ရဲအရာရှိကြီး တဦး မြန်မာ နယ်စပ်က သယ်လာတဲ့ မူးဆစ်ဆေးများနဲ့အတူ ဖမ်းမိ
ခွယ်ကဘောင်ပညာဥယျာဉ်ကျောင်း၏ Running Activities လက်ရှိလုပ်ဆောင်ချက်များ
Saya Nyo's Poems (ဒေါက်တာ မောင်မောင်ညို)
အင်တာနက် အမြန်နူန်း အတွက်ပါ
ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာအတွက် OKRSO မှ အင်္ဂလိပ်နှင့်ထိုင်း ဘာသာရပ်သင်တန်းဖွင့်လှစ်
ချင်းပြည်နယ် မူလတန်းကျောင်းများတွင် ချင်းစာပေ သင်ကြားမည်။
We all MUST KNOW.....
မလေးရှားရောက် အရက်သောက်တတ်သူ မြန်မာများအတွက် အထူးသတင်း
၂၇၅၂ ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်(ဂျာမနီ) ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း
Karen Sermon - Tharamu Lydia Po (KBCS-20121111)
မူးထ်ုအင် - လာပုံးဖါန်
သောင်ရင်း မြစ်ရေ လျှံ
ရခိုင်သားတိအတွက် ရခိုင် Bloggers တိနန်. အခြားဆိုဒ် တိကိုစုစည်းမူ
ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲဘော် ၃၀ ကျော် အဖမ်းခံထားရဆဲ
ဓါးစာခံရွာသား ၁၀၀ကျော်အား အစိုးရစစ်တပ် ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့
ထားဝယ်တွေ ဘာလုပ်မလဲ၊ ဘာလုပ်သင့်လဲ၊ ဘာလုပ်ကြမလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
Mid Atlantic Karen
Statement of Ethnic Nationalities Conference
ပြည်သူတွေ မျက်စိကန်း နားကန်းဖြစ်နေရမယ့် နအဖရဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေး
South Dakota ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီး
စစ်အစိုးရ တပ်ခေါ်ကျိုးခြေကုပ်စခန်းကို ဒီကေဘီအေက သိမ်းပိုက်
THBP (အာပူ လျှာပူ)
The Going Home Memoir:afew words intoadeep heart
Bur-Imna (လွတ်လပ်သော မွန်သတင်း အေဂျင်စီ)
Tanawthari Junior College
Welcome To Morn RaZaGree (မင်းရာဇာကြီး)
လွတ်လပ်ရေးမရခင်နဲ့ လွတ်လပ်ရေရပီးစက ကဗျာတွေပါ
Naw Hser Coo
KMKZ - RFA 05
ကျွန်တော်တို့ ကရင်လူမျိုးတိုင်း နားထောင်သင့်တဲ့ သီချင်းလေး တပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အတွက် နှစ် ၆၀
The Undoing of Our Passionate Hearts
MYANMARTHWAY BLOG (မြန်မာသွေး)
“ အမေနဲ့ခွဲ ကျောင်းနဲ့ လွဲ ပြီး ချစ်သူလည်းပျောက် အဝေးကြီးးးးးးးးးးးးးးကို ရာက်ခဲ့တဲ့။ “ “ “““မာတီဘိုးဘိုးကြိး ….. ” (kotoegyi)
YouTube မှ ရရှိသော အကျိုးကျေးဇူး ၃ မျိုး
Burmese Community Broadcasting Group (Sydney) ~ မြန်မာလူမျိုးစု - မြန်မာ့အသံ (ဆစ်ဒနီ - သြစတြေးလျ)
သဒ္ဓမ္မနန္ဒီ၊ ကျောက်ပန်းတောင်း နဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာ
낯선 개에 대한 공격적인 행동 이렇게 교육 해 보세요!
မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာ နည်းပညာများ (bluephoenix)
KNDO စစ် ဦး စီး နါ ဒါး မြ နှင့် တွေ့ ဆုံ ခြင်း
Our livelihoods have been Destroyed -15/3/2014
Republic of the Union of Myanmar (Rus)
how about you think nice or not?
The Pearl ပုလဲသွယ်
ကျီမေးလ်ဖွင့်တိုင်း Internet Explorer ပေါ်နေသူများအတွက်
Page ofaSoldier
တပ်မတော်သို့ နှုတ်ဆက်ခြင်း (from Popular news journal)
The Story of Stellia... Part 2
၀ါဒတွေကပဲ ခေတ်ကိုဖန်တီးတာလား ??? ခေတ်ကပဲ ၀ါဒတွေကိုဖန်တီးတာလား ???
ကွယ်လွန်သူ ဆရာဦးဝင့်ကျော် (ဘဏ်လုပ်ငန်းပညာရှင်)
Rainbow Colors ~ Gay & Lesbian Magazine
Kholun - ခေါဟ်လံင်ဖါသိုင့် - Eastern Burma
Myanmar Sexy Model Girls And Actress Photos
ဖတ်ခဲ့ ကြည့်ခဲ့ဘူးသော အကြောင်းအရာများ (Simonm)
(သူတို့ညီနောင်နှင့် ကျွန်တော်) နှင့် ကျွန်ုပ်အကြောင်း
တိုးတတ်လမ်းစ သို့မဟုတ် ခြေတလှမ်းအယုတ်
ဖံဖံ​အဲ​မ္ဂျ ~ Piemma2011
Aung Myo Htun Kyaw
နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာဆိုတာ ဘဏ်တွေအတွက်လား စီးပွားလုပ်တဲ့ ပြည်သူတွေအတွက်လား
ကချင်ကျော်ကျော်(အပု)တစ်ယောက်တော့ အခုထိ ခေါင်းထဲမှာ ခင်ညွန့်ပိုးဝင်နေတုန်းးးးးး
" တုံ့ပြန်မှုကင်းသော "
တပ်ရင်းမှူး ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး သိန်းစိန်ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက် တစ်ခု
တပ်မတော် ဆိုင်ရာ အကြံပြု၊ဆွေးနွေးခန်း
တပ်မတော် သံချပ်ကာတပ်ဖွဲ့၏ တိုက်ပွဲများ
တန်ဖိုး ကျပ် ၂သိန်းအောက် GSM ဖုန်းများ မတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် စတင်ရောင်းချမည်
Satt Satt Suu Suu + Suu Tuu Pyuu ~ လန်ထောင်စပ်စုလေး
The Power of Fraternity | စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား (ဖိုးတရုတ်ကင်း)
Dr Tun Kyaw Nyein
ဇတ်ဇတ်ကြဲဒီမိုကရေစီ Militant Democracy တဲ့
ပန်ဒိုရာ ~ Pandora
မြန်မာလင့် စုစည်းမှု (၁)
မြိတ်မြို့နယ်တွင် အချိန်အခါမဟုတ် လေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီးမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် လူနေအိမ်(၃၃)လုံး ပြိုကျပြီး (၂၃)လုံးပျက်စီး
ကံကောင်းလာမည် မြန်မာပြည်- ၂၀၁၉
Htet Aung Kyaw (ထက်အောင်ကျော်)
မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင် ~ မဟာဘုတ်
Ministry of Health - Myanmar
Ministry of Cooperatives, Burma
Ministry of Foreign Affairs, Burma
Ministry of Commerse, Burma
မြန်မာလင့် စုစည်းမှု (၂)
May Thingyan Hein (မေသင်္ကြန်ဟိန်း)
Taunggyi Time ~ တောင်ကြီးတိုင်းမ်
Fifty Viss (ပိဿာ ငါးဆယ်)
Poe Tha Bo
Dr.Soe Min (ဒေါက်တာစိုးမင်း)
Myitzuri.com ~ Myanmar MP3 / VCD / MTV / Movies, Celebrities and more
Politics Of Centrism And Israeli Elections – OpEd
Tavoyan Voice (ထားဝယ် လူထုအသံ)
ထားဝယ်သား ဗိုလ်မှူးကြီးဗထူး ရာပြည့်ပွဲ ထားဝယ်တွင် စည်ကားစွာ ပြုလုပ်
Kabarthit Media (ကမ္ဘာသစ် မီဒီယာ)
ယုတ္တိဆိုင်ရာ အတွေးမြင်မှားများ (Logical Fallacies) - မိတ်ဆက် (၁)
ဒီစာစုမှာ ဆန်းစစ်ဝေဖန်တွေးခေါ်ခြင်း ( critical thinking ) ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ “ယုတ္တိဆိုင်ရာ အတွေးမြင်မှားများ” (logica...
ဒီရက်ပိုင်း သတင်းတွေထဲက http://www.thithtoolwin.com/2012/05/kia-bgf.html ထဲမှာ ပါလာတဲ့ မှတ်ချက်တစ်ခုက မျက်လုံးထဲ စူးစူးရှရှ ဝင်လာ...
ထိုင်ပါများရင်တော့ တင်ပါးပူမှာပဲ ၊ သို့သော် ခံနိုင်ပါတယ် ။ တင်ပါးကို မီးလာမြှိုက်သူ ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် မခံမရပ်နိုင်လောက...
တင်ထားတဲ့ အရက်ခွက်ကို ယူသောက်တော့လဲ အရင်လိုပဲ ၊
“အကယ်၍ အဲဒီသစ္စာဖေါက်တွေသာ အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင် ၊ ခမာလူမျိုးတွေဟာ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ မှာပဲ ၊ ဒီတော့ ကျုပ်တို့ချခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟ...
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ပြင်ဆင်မှုများ (နောက်ဆက်တွဲ - ၂)
သုတေသန (Research) သုတေသန လို့ဆိုလိုက်ရင် ငယ်စဉ်က အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကိစ္စ၊ ပညာအဆ မတန် တတ်သူများရဲ့အလုပ် ရယ်လို့နားလည်ခဲ့ရပေမယ့် ဒီကနေ့ခေ...
စကောကရင် စကားပါ ။ “ဗမာ လာပြီ” - လို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ် ။ ပိုးကရင်လိုလည်း ရှိပေမယ့် ၊ လိုရင်းတိုရှင်းအဖြစ်ဆုံး စကောကရင် အသုံးနှုန်း...
နအဖ လက်ဟောင်း သတင်းဋ္ဌာနများ
အဆိပ်အတောက်စာများ (Poison Pens)
Hla Oo's Blog - ဦးလှဦး